> Resource> Atụmatụ> Wedding Song List - Wedding Songs maka ememme, N'ikuku na Dance
Wedding bụ ihe kasị kwesịrị ncheta omume nke ndụ ya. Ka atụmatụ a zuru okè agbamakwụkwọ, na e nwere ọtụtụ ihe ị ga-ewere echiche, na mgbe ụfọdụ nnọọ akwara-wracking. Ka ihe atụ, mkpa ka ị họrọ agbamakwụkwọ songs ka dakọtara dị iche iche n'oge maka agbamakwụkwọ usoro. Ebe a bụ ụfọdụ agbamakwụkwọ music aro maka ememe agbamakwụkwọ na n'ikuku, na naa na ncheta. Ndị a niile agbamakwụkwọ songs bụ bukwanu ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka a agbamakwụkwọ ngosi mmịfe, nke ga-playback kasị nwee obi ụtọ oge nke unu abụọ n'ihu gị ememe agbamakwụkwọ ma ọ bụ na-echeta gị ememe mgbe agbapụ ọtụtụ foto agbamakwụkwọ.
Ọ bụrụ na ọ bụ enyi gị agbamakwụkwọ, i nwere ike ahọtakwara agbamakwụkwọ songs si n'okpuru na ikpokọta na-alụ nwanyị ọhụrụ na nwunye photos n'ime a agbamakwụkwọ ngosi mmịfe na ọkụ dị ka onyinye DVD, na mgbe ahụ-eziga ka enyi gị. Ha nwere ike ịbụ otú nnukwu na ị na-enye ha otú oké ọnụ ahịa na-enweghị atụ ugbu a.
1. Wedding ememe music
2. Wedding n'ikuku songs
3. Wedding ncheta songs
4. Download niile music n'elu free na TunesGo
Wedding songs ndepụta - oké agbamakwụkwọ songs ọ bụla oge
: Buteere music na-egwuri tupu ememe dị ka ndị ọbịa na-nọ ọdụ. Ndị a songs ga-emekwa ka ụda n'ihi na gị ememe, ya mere oge gboo ma ọ bụ Jazz music ọtụtụ egwuri. Ụfọdụ oké agbamakwụkwọ prelude music ndị dị ka ndị:
1. Greensleeves - Oge gboo Wedding omenala
2. Ave Maria - N'ihi na gị Wedding ememe
3. Ikuku na a G Eriri - N'ihi na gị Wedding ememe 4. site n'anya Ịhụnanya - Nịm gị Wedding ka Music
5. Greensleeves - Nịm gị Wedding ka Music
6. Buteere na C - N'ihi na gị Wedding ememe
7. The Wedding Song - Nịm gị Wedding ka Music
9. Ichere na a Nwanyi - Brad Pasley
Wedding processional na ọnụ ụzọ songs
: Wedding processional music na-egwuri mgbe Agbamakwụkwọ ọzọ na-alụ ọhụrụ ka ha n'ọnụ ụzọ. Ụfọdụ oké agbamakwụkwọ processional songs ndị dị ka ndị:
1. Agbamakwụkwọ March - Wedding March
2. Egbe ala na D - Oge gboo Wedding Music omenala
3. Opupu - Oge gboo Wedding omenala
4. Ikuku na G Eriri - N'ihi na gị Wedding ememe
5. Anọ kara Winter - N'ihi na gị Wedding ememe
6. Jesu, Joy nke madu si achọ - N'ihi na gị Wedding ememe
7. Nke a ga-(Otu Ebighị Ịhụnanya) - Natalie Cole
8. Agbamakwụkwọ Chorus - Nịm gị Wedding ka Music
9. Opi Voluntary - N'ihi na gị Wedding ememe
10. Fernandes ise - N'ihi na gị Wedding ememe
: Wedding interlude songs na-ejikarị n'oge ememe iji gosi a oge pụrụ iche maka di na nwunye. Nke a ga-a zuru okè ụdị song na-egwu n'oge ọkụ nke a ịdị n'otu kandụl. Ụfọdụ oké agbamakwụkwọ interlude songs ndị dị ka ndị:
1. Gburugburu nke Ndụ site Elton John
2. Too Old Na Me site Mary Chapin anamusọ eto
Mary Chapin anamusọ eto bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter na-akụ egwú. Ọkwá nkà nọrọ ọtụtụ afọ na-abụ abụ na Washington, DC, klọb tupu a bịanye aka na afọ n'afo 1980 na Columbia Records, onye ahịa ya dị ka a na-agụ egwú mba.
3. Nye m Ruo Mgbe Ebighị Ebi site John Tesh
John Frank Tesh bụ ihe American pianist na dere na nke pop music, nakwa dị ka a redio usu na telivishọn A.
4. New Ịdị n'Otu kandụl Songs site Wedding Music Central
Celtri enye omenala Celtic na Irish music on ngwá gụnyere ọjà, tin fụọ mkpọrọhịhị, Celtic harp, omume ugha na guitar, n'ịkpọ ụbọ akwara,. ... IRELANDS Premiya MUSIC Band ... Specialising na agbamakwụkwọ music maka ma Religious na Civil nme
5. opi Voluntary site Oge gboo Wedding Music omenala
Oge gboo Wedding Music omenala
6. La Rejoissance site Oge gboo Wedding Music omenala
: The recessional song agba ọhụrụ gị nkwa na-egwuri dị ka ị na-eje ije ruo wara wara ọnụ. Ụfọdụ oké agbamakwụkwọ recessional songs ndị dị ka ndị:
1. A Little Naa mkparịta ụka site naa Presley
Mac Davis, Billy Iju
N'afọ iri na ụma na Bad, Mkpụrụ obi
Naa Aaron Presley bụ onye America na-agụ egwú na omee.
2. Mgbe Tonight site Justin Nozuka
Pop, now, mkpụrụ obi
Justin Tokimitsu Nozuka bụ a Canadian-American na-agụ egwú na songwriter. Ya mpụta mbụ album Holly a tọhapụrụ na Europe, Canada, Japan na United States.
3. All Ịhụnanya site Bryan Adams
Bryan Guy Adams, OC OBC bụ a Canadian na-agụ egwú songwriter, egwú, na-emeputa, omee, na-elekọta mmadụ mmume, na photographer. Adams bilie ka ama North America ya album he Dị ka a Knife ma ghọọ a global kpakpando ya 1984 album aghara.
4. All ọ ga-eme site Sheri Miller
Sheri Miller bụ a na-agụ egwú / songwriter; enye akamanade ke Long Island, New York. Nne ya bụ onye opera-agụ egwú na oge gboo pianist, na deede ya bụ a ndekọ engineer, na-arụ ọrụ na chick Corea, James Brown, na Smokey Robinson.
5. All My Life K site Ci & Jojo
R & B, mkpụrụ obi
K-Ci & JoJo bụ ihe American R & B duo, esịnede ụmụnna Cedric "K-Ci" Hailey na Joel "JoJo" Hailey, Nwe Ala nke Monroe, North Carolina
6. niile ị chọrọ bụ Ịhụnanya site beatles
Psychedelic nkume, Baroque Pop, pop
7. All gburugburu m (Na Na) site Flyleaf
8. All na a Ogige Green site Julia Lane
Julian uzo bụ a na-abụ abụ onye na-maara nke ọma maka ya song niile na ubi green.
9. All m Ịhụnanya site Dugara Zepplin
Jones / Osisi
Symphonic nkume, ike nkume
Ikanam Zeppelin bụ English oké nkume mmachi guzobere London na 1968. The ìgwè ẹkewetde nke guitarist Jimmy Page, na-agụ egwú Robert osisi, bassist na keyboardist John Paul Jones, na oku igba John Bonham.
10. tụrụ n'anya site Lonestar
Country (mbụ), Soft nkume / pop (remix)
Lonestar bụ ihe American mba music ìgwè esịnede Richie McDonald, Michael Britt, Keech mmiri ozuzo, na Dean Sams. Tupu otu ntọala, ma mmiri ozuzo na Britt bụ ndị so nke ìgwè Canyon.
: The postlude-arụ ná ngwụsị nke na-eme ememe ahụ, mgbe recessional. Dị ka gị ọbịa ụzọ ọpụpụ, na postlude music kwesịrị ịnọgide na upbeat ọnọdụ.
1. Angel site Chaka Khan
R & B, mkpụrụ obi, Funk
Chaka Khan bụ ihe American na-agụ egwú-songwriter onye ọrụ ka spanned iri afọ anọ, na-amalite na 1970 dị ka frontwoman na Baịbụl hiwere isi n'ebe nke Funk gbalaga Rufọs.
2. Annie ọzọ Song site John Denver
Henry John Deutschendorf, Jr., mara professionally dị ka Jọn Denver, bụ onye America na-agụ egwú-songwriter, omee, mmume na akwalite ọdịmma ndị mmadụ, onye kasị ukwuu azụmahịa ịga nke ọma dị ka a solo na-agụ egwú, na-amalite na 1970
3.-abụ mgbe Ebube site Earth, ifufe, na Fire
R & B, mkpụrụ obi, Jazz, Funk, pop
Earth, Ifufe & Fire bụ ihe American gbalaga na spanned ndị egwú Genres nke R & B, mkpụrụ obi, Funk, Jazz, Disko, Pop, nkume, Latin na African. Ha bụ otu n'ime ihe ndị kasị ịga nke ọma na critically acclaimed ìgwè narị afọ nke 20.
4. n'ihi na unu hụrụ m n'anya site Celine Dion
Pop, R & B, Okenye dịkọrọ ndụ
Celine Marie Claudette Dion, CC OQ ChLD bụ a Canadian-agụ egwú, songwriter, na-azụ ahịa na mgbe ụfọdụ omee.
5. Kwere site Lenny Kravitz
Njem iwuli elu, Latin pop
Leonard Albert "Lenny" Kravitz bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, multi-instrumentalist, ndekọ-emeputa, omee na-arranger, onye "ochie" ịke incorporates ọcha nke oké nkume, Bad, mkpụrụ obi, R & B, na Funk
6. ọbara ọgbụgba Ịhụnanya site Leona Lewis
Leona Louise Lewis bụ a British-agụ egwú, songwriter na anụmanụ ọdịmma campaigner. Ọ nọ na-amụ ma na-zụlitere na London Borough nke Islington, ebe ọ gara BRIT School maka Ịrụ Arts na Technology.
7. Ị Pụrụ Kwere site Robin Thicke
Robin Thicke bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter na-emeputa.
8. kpọrọ site Madonna
Madonna Louise Ciccone bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, omee, na-azụ ahịa. Ọ Rụzuru ewu ewu site n'ịgba ókè nke in-a me ọdịnaya na mainstream ewu ewu music na imagery ya music videos, nke ghọrọ nfiksi on MTV.
9. kpọrọ The Treasure site Steven Green
Steve Green (mụrụ August 1, 1956) bụ a Christian music-agụ egwú, ọwọrọiso ya olu nso (tenor) na mgbanwe solo ịke. N'ime ya 35 afọ ọrụ, Green e asọpụrụ dị ka a anọ oge Grammy Award nominee, asaa-oge Nduru Onyinye-eto eto. O nwere 13 Nke 1 songs, ma rekwa n'elu nde mmadụ atọ albums.
10. Dawn site Mpako na Ịkpọasị soundtrack
Mpako na Ịkpọasị soundtrack
Nganga & Ịkpọasị bụ soundtrack ka 2005 film nke otu aha na e dere Dario Marianelli na rụrụ site Jean-Yves Thibaudet na English Chamber egwú.
N'ihi na oriri agbamakwụkwọ, agbamakwụkwọ agba egwú songs ndị dị oké mkpa. Mbụ agba egwú agbamakwụkwọ songs, nna nwa agbamakwụkwọ songs na nne nwa agbamakwụkwọ songs ị na-ahọrọ na-mkpa karịsịa. Nwere a lee anya na songs ma na-achọta ezi songs maka agbamakwụkwọ gị n'ikuku.
Mbụ agba egwú agbamakwụkwọ songs
: Ebe ọ bụ mbụ agba egwú agbamakwụkwọ song bụ Central akụkụ nke nnukwu ụbọchị, ọ bụ mkpa nke na ọ na-dị nnọọ mma. Ka agbamakwụkwọ gị mbụ agba egwú song agwa akụkọ nke mmekọrịta unu. -Gaa na akaụntụ ẹbọ nke agba egwú di na nwunye chọrọ - ihe fun, ihe na-adịghị na ihunanya, ma ọ bụ ihe dị n'etiti - na mgbe ahụ lelee a ndepụta nke agbamakwụkwọ mbụ agba egwú songs.
1. A Groovy Ụdị Ịhụnanya nke site Phil Collins
Carole Flo Rida feat Sager, Toni Wine
Philip David Charles "Phil" Collins, RVO, bụ ihe English-agụ egwú, songwriter, multi-instrumentalist, music emeputa ihe na omee. O nwetara ama dị ka ma ndị oku igba na-edu ndú na-agụ egwú maka oké nkume mmachi Jenesis, nakwa dị ka n'ụwa nile ịga nke ọma dị a solo-ese.
2. A Whole New World site Peabo Bryson
Peabo Bryson bụ ihe American R & B na mkpụrụ obi na-agụ egwú-songwriter, a mụrụ na Greenville, South Carolina. Ọ na-maara nke ọma maka na-abụ abụ adụ-nkume ballads na ya onyinye ọtụtụ Disney animated atụmatụ soundtracks.
3. Angel m site Monica
Monica Denise Brown, nanị maara dị ka Monica, bụ onye na American na-agụ egwú, na-emeputa, na-eme ihe nkiri. Mụrụ na zụlitere College Park, Georgia, ọ malitere na-eme dị ka nwatakịrị na ghọrọ akụkụ nke a na-ejegharị gospel ukwe na afọ nke iri.
4. ike nyere aka na-ada Ịhụnanya site naa Presley
Hugo Peretti, Luigi Onye Okike, George David Weiss, Hugo Peretti, Luigi Onye Okike, George David Weiss
Naa Aaron Presley bụ onye America na-agụ egwú na omee. Weere dị ka otu n'ime ndị kasị dị ịrịba ama omenala akara ngosi nke narị afọ nke 20, ọ na-emekarị kwuru na dị ka "Eze nke Rock na Roll", ma ọ bụ nanị, bụ "Eze".
5. Ná nrọ nke Ị site Selena
Selena Quintanilla-Pérez bụ onye America na-agụ egwú, songwriter, ọnụ na-ekwuchitere, omee, na ejiji mmebe.
2. Ruo Mgbe Ebighị Ebi na N'ihi Always site Shania Twain
Country, Pop, ụwa
7. Too Old Na Me site John Lennon
John Winston Ono Lennon MBE bụ ihe English-agụ egwú na songwriter onye biliri na n'ụwa nile ama dị ka a ngalaba-nchoputa nke ìgwè beatles, ndị kasị commercially ọma gbalaga na akụkọ ihe mere eme nke na-ewu ewu music.
8. m ikwere na ị na Me site Whitney Houston
9. Moonlight Serenade site Glenn Miller
Alton Glenn Miller bụ onye American nnukwu gbalaga egwú, arranger, dere, na bandleader na siwing oge. Ọ bụ ihe kasị mma-ere ndekọ omenka malite na 1939 ruo 1943, na-eduga onye nke kasị mma mara nnukwu gbalaga.
10. Wepụta My Life Site Ị site Eric Benet
Eric Benét Jọdan, mara professionally dị ka Eric Benét, bụ ihe American R & B na neo mkpụrụ obi na-agụ egwú-songwriter, onye natara a ngụkọta nke anọ Grammy Nhoputa ka ụbọchị ya egwú ọrụ.
Nna nwa agbamakwụkwọ songs:
Nna nwa agbamakwụkwọ songs bụ otu n'ime ndị mara mma Isi nke ọ bụla agbamakwụkwọ, na nna nwa agba egwú bụ a pụrụ iche, obi oge na pụrụ ịbụ nnọọ nke mmetụta uche. Nna nwa agbamakwụkwọ agba egwú songs bụ ndị pụrụ iche etoola. Na oge a, nna na-ekweta, ya obere girl bụ nwaanyị njikere na iba na ya njem nke ndụ.
1. A Song nwa m nwanyị site Ray Allaire
Ray Allaire bụ a music isinger onye na-mma mara maka ya song nwa m nwanyị nke e wepụtara n'afọ 2010
4. ịkpọlitere m site Josh Groban
Joshua Winslow "Josh" Groban bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, omee, na ndekọ na-emeputa.
3. Ọ bụghị Ọ mara mma site Stevie Ijuanya
Stevland Hardaway Morris, mara site na ya ogbo aha Stevie eche, sị, bụ ihe American egwú, na-agụ egwú, songwriter, ndekọ-emeputa, na multi-instrumentalist.
4. Gịnị A Ebube World site Louis Armstrong
Louis Armstrong, utu aha Satchmo ma ọ bụ Pop bu mmiri ogwu, bụ onye American Jazz trumpeter, na-agụ egwú, na otu onye nke pivotal na kasị akpa ọgụgụ na Jazz music.
5. Angel na ogwe aka m site Jack Kapanka
Jack kapanker bụ a na-abụ abụ onye na-ukwuu mara maka ya song angel n'ogwe aka m.
6. A Little Ray Of Sunshine site Glen Shorrack
Glenn Barrie Shorrock bụ ihe English-mụrụ Australian na-agụ egwú-songwriter. Ọ bụ a tọrọ ntọala so pop iche iche The Twilights, Axiom na Little River Band nakwa dị ka ịbụ a solo ngosi.
7. Ị bụ Sunshine nke My Life site Stevie Ijuanya
Mkpụrụ obi, pop
8. Daddy si Little Girl site Michael Bolton
Michael Bolotin, mara professionally dị ka Michael Bolton, bụ ihe American-agụ egwú na songwriter.
9. Butterfly nsutu site Bob Carlisle
10. Daddy si Girl site Peter Cetera
Peter Paul Cetera bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, na bassist kasị mara maka ịbụ onye mbụ so na oké nkume mmachi Chicago, tupu launching a ịga nke ọma solo ọrụ.
Nne nwa agbamakwụkwọ songs:
Nne-nwa agbamakwụkwọ agba egwú nwere ike ịbụ melodic na-akpụ akpụ n'ihi na ọ bụ "Akpatre Dance" nke nne na nwa ya nwoke (-alụ nwanyị ọhụrụ) tupu enye ya pụọ ​​ọzọ dị mkpa na nwaanyị ná ndụ ya.
1. A Song maka Mama site Boyz II Men
5. n'ihi na unu hụrụ m n'anya site Celine Dion
3. agọzi Elton John
Rock, pop nkume
4. Nso gị site na ndi-ọkà n'osisi
The ọkwa nkà bụ American olu na instrumental duo esịnede ụmụnne Karen na Richard anamusọ eto. Ịmịpụta a distinctively adụ egwú ịke, ha ghọrọ n'etiti ndị kasị mma-ere music artists niile oge.
5. egwú Queen site Aba
ABBA ndị a Swedish pop ìgwè guzobere Stockholm na 1972.
6. Nwere m gwara gị n'oge na-adịbeghị site Rod Stewart
7. Aga m ada site gị site The Pretenders
Soft nkume, ọzọ nkume
The Pretenders bụ onye English-American oké nkume mmachi guzobere Hereford, England, na March 1978. The mbụ gbalaga ẹkewetde nke initiator na isi songwriter Chrissie Hynde, James Honeyman-Scott, Pete Farndon, na Martin Chambers.
8. Sweet Child O uehal site Naah N Roses
Axl Rose, egbukpọ, Izzy Stradlin
Ike nkume, glam metal
Egbe N 'Roses bụ ihe American ike oké nkume mmachi si Los Angeles guzobere 1985.
9. Time nke ndụ gị site Green Day
Na Na nkume, adụ nkume, ọzọ nkume
Green Day bụ ihe American Punk oké nkume mmachi guzobere 1986 site vocalist / guitarist Billie Joe Armstrong na bassist Mike Dirnt.
10. ịkpọlitere m site Josh Groban
Naa, ndị mmadụ-amasị iji ncheta agbamakwụkwọ songs akara ha ncheta agbamakwụkwọ ọzọ usọrọ nnukwu oge. Ụfọdụ oké ncheta agbamakwụkwọ songs na-depụtara n'okpuru:
1. Nke a m Nkwa Ị site NSYNC
Pop, R & B, mkpụrụ obi
NSYNC bụ ihe American nwata gbalaga guzobere Orlando, Florida na 1995 na ulo oru na Germany BMG Ariola Munich. NSYNC ẹkewetde nke Justin Timberlake, JC Chasez, Chris Kirkpatrick, Life Fatone, na Lance Bass.
3. Dị ka ị na-site Billy Joel
Soft nkume, na-ege ntị mfe
William Martin "Billy" Joel bụ ihe American pianist, na-agụ egwú-songwriter, na andiwet.
4. Lets Nọrọ ọnụ site Al Green
Albert "Al" Greene, mgbe mgbe maara dị ka The Reverend Al Green, bụ ihe American na-agụ egwú a kasị mara maka Ndekọ a usoro nke mkpụrụ obi hit kpọrọ ná mmalite afọ ndị 1970
6. ịhụnanya ga-eme Anyị ọnụ site Captain na Tenille
Captain & Tennille ndị American ndekọ nka onye bụ isi ihe ịga nke ọma mere na 1970. The di-na-nwunye duo bụ "Captain" Daryl dragọn ahụ na Cathryn Antoinette "Toni" Tennille.
7. Nile n'elu site Maino
Jermaine Coleman, mma mara ya ogbo aha Maino, aka KOB Eze nke Brooklyn, bụ ihe American hip iwuli elu ndekọ omenka si Brooklyn, New York City, New York.
8. My Life site site The Game
Hip iwuli elu, Maara hip iwuli elu
Jayceon Terrell Taylor, mma mara ya ogbo aha The Game ma ọ bụ nanị Game, bụ ihe American rapper na omee. Game a kasị mara amara dị ka a rapper na West Coast hip iwuli elu idaha, na n'ihi ịbụ otu n'ime Dr. Dre kasị ọwọrọiso protégés.
9. Olee ebe U na site ịgba Yang
R & B, hip iwuli elu, pop
Dong-eto Eto-Bae, mma mara ya ogbo aha Taeyang ma ọ bụ Sol, bụ South Korean na-agụ egwú-songwriter. Mgbe pụtara na Jinusean si music video "A-yo", Taeyang malitere ọzụzụ n'okpuru YG Entertainment na afọ 12.
10. Your Song site Elton John
Mgbe agbamakwụkwọ, ị nwere ike akpọkọta ndị unu foto agbamakwụkwọ ma họrọ ụfọdụ agbamakwụkwọ songs si n'elu dị ka ndabere music na-eme ka a agbamakwụkwọ DVD ngosi mmịfe iji chebe gị kwesịrị ncheta oge ruo mgbe ebighị ebi!